ချစ်သူကိုကို ကို မူနွဲ့ပြီး စိတ်ကောက်တဲ့ အိုင်တင်လေးနဲ့အသည်းယားစရာကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး...! - Thadin
HomeCELEBRITYချစ်သူကိုကို ကို မူနွဲ့ပြီး စိတ်ကောက်တဲ့ အိုင်တင်လေးနဲ့အသည်းယားစရာကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး…!
ချစ်သူကိုကို ကို မူနွဲ့ပြီး စိတ်ကောက်တဲ့ အိုင်တင်လေးနဲ့အသည်းယားစရာကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး…!
March 13, 2019 Kay Kay CELEBRITY Comments Off on ချစ်သူကိုကို ကို မူနွဲ့ပြီး စိတ်ကောက်တဲ့ အိုင်တင်လေးနဲ့အသည်းယားစရာကောင်းအောင် သရုပ်ဆောင်ပြနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေး…!
အနုပညာလောကထဲမှာ ပရိတ်သတ်တွေသတိထားမိလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစ်စိုက်မက်မက်လုပ်ဆောင်ပြီး အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းစာတစ်ဖက် အလုပ်ကတစ်ဖက်နဲ့ နှစ်ခုလုံးကို လစ်ဟာမှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနုပညာဝါသနာအိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူဖြူထွေးကတော့ အခုဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေကို အရမ်းလုပ်လာရတဲ့ တက်သစ်စအနုပညာရှင်လေးပါ။ကြော်ငြာတွေအများကြီးလည်း လက်ခံရိုက်ကူးနေသလို ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမကို အားပေးချစ်ခင်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလည်း ရှိသလို ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ပရိတ်သတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။အနုပညာသမားတစ်ယောက်ဆိုရင် ဝေဖန်ခံရမှာ ဓမ္မတာပဲမို့ သူမကတော့ အားလုံးကို မေတ္တာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်ပါတယ်နော်။
ဖြူဖြူထွေးက အနုပညာအလုပ်ကရတဲ့ အနုပညာကြေးလေးနဲ့ မိဘတွေအပေါ်လုပ်ကျွေးနေတဲ့ သမီးလိမ္မာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြူဖြူထွေးက tiktok လေးတွေ ရိုက်ရတာလည်း ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သူမကတော့ ဒီဇိုင်းကာလာအမျိုးမျိုးချိန်းပြီး အသစ်အဆန်းတွေကို ပရိတ်သတ်တွေကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း သူမရိုက်ကူးနေတဲ့ ဇာတ်ရုပ်လေးတွေကို Tiktok လေးရိုက်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို မျှဝေထားပါတယ်နော်။
အနုပညာလောကထဲမှာ ပရိတျသတျတှသေတိထားမိလာတဲ့ ဖွူဖွူထှေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှကေို တဈစိုကျမကျမကျလုပျဆောငျပွီး အနုပညာလောကထဲကိုဝငျရောကျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ဖွူဖွူထှေးက တက်ကသိုလျကြောငျးသူတဈယောကျဖွဈပွီး ကြောငျးစာတဈဖကျ အလုပျကတဈဖကျနဲ့ နှဈခုလုံးကို လဈဟာမှုမရှိအောငျ ဆောငျရှကျနတေဲ့ အနုပညာဝါသနာအိုးလေးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။
ဖွူဖွူထှေးကတော့ အခုဆိုရငျ အနုပညာအလုပျတှကေို အရမျးလုပျလာရတဲ့ တကျသဈစအနုပညာရှငျလေးပါ။ကွျောငွာတှအေမြားကွီးလညျး လကျခံရိုကျကူးနသေလို ဇာတျကားတှကေိုလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျနပွေီဖွဈပါတယျ။သူမကို အားပေးခဈြခငျတဲ့ ပရိတျသတျတှလေညျး ရှိသလို ဝဖေနျပွောဆိုတဲ့ပရိတျသတျတှလေညျးရှိပါတယျ။အနုပညာသမားတဈယောကျဆိုရငျ ဝဖေနျခံရမှာ ဓမ်မတာပဲမို့ သူမကတော့ အားလုံးကို မတ်ေတာနဲ့ပဲတုံ့ပွနျပါတယျနျော။
ဖွူဖွူထှေးက အနုပညာအလုပျကရတဲ့ အနုပညာကွေးလေးနဲ့ မိဘတှအေပျေါလုပျကြှေးနတေဲ့ သမီးလိမ်မာလေးပဲဖွဈပါတယျ။ဖွူဖွူထှေးက tiktok လေးတှေ ရိုကျရတာလညျး ဝါသနာပါသူတဈယောကျဖွဈလို့ သူမကတော့ ဒီဇိုငျးကာလာအမြိုးမြိုးခြိနျးပွီး အသဈအဆနျးတှကေို ပရိတျသတျတှကေို ဖျောပွနတောဖွဈပါတယျ။အခုဆိုရငျလညျး သူမရိုကျကူးနတေဲ့ ဇာတျရုပျလေးတှကေို Tiktok လေးရိုကျပွီး ပရိတျသတျတှကေို မြှဝထေားပါတယျနျော။
တောင်ကိုရီးယားမှ ၃၅၉ ပိုင်း အပိုင်းခံရသော မိန်းမချောလေး…
အမဲစက်​ မှဲ့​ခြောက်​ သက်​သာ​ပျောက်​ကင်းတဲ့ ကိုယ်တွေ့အာလူးသီး…!
This Month : 37071
This Year : 232469
Total Users : 591493
Total views : 2713254